Korea : Maty ilay filoha tsy nanao kolikoly indrindra fa ampangaina ho manao kolikoly izy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2009 19:25 GMT
Nodimandry androany (sabotsy) ny filohan'i Korea teo aloha Roh Moo-hyun. Nanandrana nandao ny fiainany milamina tao an-tanàna niaviany tamin'ny alalan'ny fitsambikinana tany amin'ny hantsana tao ambadiky ny tranony ny filoha rehefa nahatsiaro nijaly noho ny raharahan-kolikoly sy fanadihadiana ataon'ny fampanoavana aminy. Na dia tsy misy loatra aza ny porofo ahafahana manameloka azy dia ny fanenjehana tsy mitsahatra ataon'ny fampahalalam-baovao sy ny faneriterena mafy aminy no nahatonga azy handray izao fanapahan-kevitra izao. Nanaitra an'i Korea ny fahafatesany. Malahelo noho ity vaovao ity ny olona ary nisy ny efa manahy ny hikorontanan'ny tontolo politika. Avy any amin'ny aterineto aloha no tena nahitàna voalohany ny fihetseham-pon'ny olona.
Indreto ny onjan-dahatsoratra sy hevitra mitodika amin'ity vaovao manaitra ity:
Korea no namono azy.
Hahatsiaro anao ho ilay filoha niady ho an'ny olona hanohitra ny matanjaka ny tantara. Manantena aho fa hahita fiadanana ianao any amin'ny tontolo hafa misy anao any ary ho teraka any amin'ny toerana ahafahana maneho ny tarigetranao tsara sy ny nofinofinao indray anie ianao.
Tsy ho an'ny vahoaka ny fitsarana amin'ity firenena ity fa ho an'ny matanjakal!! Raha manana namana tsy manam-bola aho, fa manana tarigetr tsara kosa, dia aleoko kosa manohana ilay namana amin'ny volako… Fa inona mihitsy ny ratsy nataon'i Roh Moo-hyun e? Nikasa ny hiaina any amn'ny tanànany ny filoha teo aloha ary hiasa ho an'ny tontolo iainana. Nahoana no dia mankahala fatratra ity filoha ity ny mpitondra amin'izao fotoana izao? Nifandray tànana i Obama sy i Hilary hiasa miaraka ho amin'ny ho avin'i Amerika…Roh Moo-hyun manko no fanantenanay.[…]
Aoriana any dia hanaiky ny tantara fa filoha marina teo anatrehanay ianao
Korea irery ihany no firenena mampiasa youtube sy google manakana ny hevitry ny mpiserasera tsy hivoaka. Tsy nitsaha-namoaka vaovao momba ny kolikoly ataon'ny Roh hatrany ny fampahalalam-baovao na dia tsy nisy aza ny porofo. Ny mpaka vaovao avy any ivelany moa dia ny mamerina izay ambaran'ny gazetin'i Cho-Joong-Dong ihany no ataony. Eo imason”izao tontolo izao moa, noho ny fanakanana ny hevitry ny olona dia izay ambaran'ireo gazetin'i Cho-Joong-Dong ihany no miampita any ivelany ka heverina ho hany marina. Sokafy tsara ny masonao hahita ny fisongadin'ny jadona.
Fa inona ny nataon'ny governemanta?
Vaka ny saiko. Nanohana azy aho tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny 2002 ary nitsikera azy taty aoriana…Izy no filoham-pirenena nanakaiky ny vahoaka indrindra. Izy irery no namela y tanora sy ny mpiserasera ho liana politika. Nahita an'i Lee Myung-bak(filoha ankehitriny) tao amin'ny fahitalavitra aho taorian'ny nandrenesana ity vaovao ity. Jerena ho hatsatra ny lehilahy. Tsy nieritreritra an'i Roh Moo-hyun hamono tena mihitsy izy hanaporofoana ny fahadiovany. Mino aho fa izy no tena taitra indrindra. Maro ireo olona te-hampionon-tena teny an-dalambe. Mazava loatra fa efa niandry azy ireny ny polisy ary nifandòna tamin'izy ireo mihitsy. Ankoatra izany, vantany vao nambara ny fahafatesany dia nisy ny tranga tsy izy mihitsy niseho. Nanambara ny fahavitan'ny fanadihadiana ny tao amin'ny fampanoavana. Nisy zavatra noraiketin'ny tantara momba ny fitondrana Lee indray.-Novonoin'ny fitondrana ny filoha teo aloha.
Ny fanadihadiana tsy mitsahatra nataon'ny fitsarana sy ny vaovao mitantara amin'ny antsipiriany ve no nahatonga ity voina ity?
Lasa ihany tamin'ny farany i Roh Moo-hyun. “Aza manameloka na iza na iza. Izay no lahatra.” Niady tamin'ny fitondrana izy nandritra ny androm-piainany iray manontolo, fa tsy afa-nanao nihoatra izay ka nandao antsika. Ry fahefam-pitsarana….Ry Cho-Joong-Dong (ny gazety mpandala ny nentindrazana telo)… Ry Antoko Nasionaly Lehibe…Ry Lee Myung Bak…. Faly ve ianareo? mahatsiaro mihatsaratsara kokoa ianareo? Izao ve no notadiavinareo?
Tsy manaiky izao vaovao izao ny vahoaka.
[…]Nahoana ianao no namono tena? Indrisy. Niady mafy ianao nandritra ny vanim-potoanan'ny jadona. Mbola miaina tsy manana ahiahy hatramin'izao ireo nifehy ny jadona. Fa nahoana ianao no nandao voalohany? Miaina amin-kenatra ny saro-tahotra namela ny mpitolona demaokraty ho faty.[…]
Mitovy ny fahatsapan'ny mpanohana sy ny tsy mpanohana
[…]tena samihafa tokoa ny ’politika’ nianarana tany an-tsekoly sy ‘izay’ taty ivelan'ny sekoly. Diso tamin'ny fitondrana teo aloha aho indraindray, saingy notohanako izy satria nino ny ‘finoana’ sy ny ‘fitsipika fototra’ noteneniny aho. Tsy mpanohana mafana fo aho, saingy te-hiaro azy kosa noho ny tsy nitsaharany nampihatra ny fitsipika napetrany na dia teo aza ny fanenjehan'ny fitondrana mpandala ny nentin-drazana sy ny fampahahalalam-baovao. Tsy nanohitra ny fomba fiteniny aho. Mahatsiaro ny mahaolombelona ahy aho.[…]
Ity lahatsoratra ity no maneho ny nataon'ny rehetra raha vao naheno ity vaovao nanampoka ny maro ity nandritra ny faran'ny herinandro. Maro ny mpiserasera nanoratra taratasy taminy.
Natory maraina aho mba hanalako ny harerahako nandritra ny herinandro. Mamy hatrany mateteika izany torimaso sabotsy maraina izany. Fa nivadika ny tontolo rehefa taitra aho. Tsy nino aho. Tsy te-hino aho. Lay andro nijery vaovao fotsiny aho nandritra ny tontolo andro. Tsy nety nino aho na dia ny vaovao teo ihany aza no niverimberina ary efa miha-hay tsianjery ny tavan'ny olona niteny. Lasa ny iray andro fa mbola eo ihany aho. Tsy nahatsiaro noana mihitsy aho nandritra ny tontolo andro. Foana tanteraka ny ao an-dohako. Saingy mieritreritra aho fa tokony atrehina amin'izao ny zavamisy. Tsy mpikambana ao amin'ny Rohsamo aho (Fikambanana tia an'i Roh Moo-hyun). Nitsikera ny fomba fitondranao aho, saingy nieritreritra matetika aho fa tsara ny filozofia politikanao. Nahatsiaro ho manina anao kokoa aho hatramin'ny nanombohan'ity zavamaharikoriko ity (fitondrana ankehitriny). Tsy tsapako ho lehibe tahaka izany ny feonao nanohitra ny fitiavankely. Nanome hery ahy ny tsikinao. Lasa ny fotoana ka tsapako fa irery ianao. Tsapako fa zavadoza sy mety hahafaty tokoa ny fihaikanao ny matanjaka sy ny manana fahefana. Maro ny mpanao politika no miresaka ny filozofia politikany fa vitsy ny mampihatra izany. Fa tsy nisalasala ianao fa nanatontosa azy. Tsy nijanona ianao fa nanohy ny lalanao. Tsy mora ny lalana nofidianao. Nasehonao fa azo atao hatrany ny manao zavatra noho ny fikirizana sy ny finoana hanatontosana azy. Nasehonao tamin'ny rehetra fa tsy tamin'ny vitsivitsy ny atao hoe fitoviana. Nasehonao fa afa-mandresy ny fitondrana mpirehareha iza efa teo nandritra ny 50 taona isika. Tsaroako fa nizotra tamin'ny dianao hatrany ianao na ratsy ny andro na nandrivotra sy nanorana aza. Tadidiko fa niteny hatrany ianao na dia teo hatrany aza ny fafy lainga sy ny fanenjehana, tsy azo afenina mandrakizay ny marina. Ny olona niteny anao hoe Ledombo Roh Moo-hyun, fa izaho kosa mahatsiaro ny tsikinao. Avy amin'ny olona manana fitsipika fototra sy finoana ihany ny tsiky.
Ankehitriny, tsy maintsy manaiky aho fa nandao tokoa ity tany ity ianao. Ary tokony hotsarovako ny tianao holazainay sy hataonay. Omaly ny andro nahaterahako fa androany ny andro nandaozanao ity tany ity. Tsy hanadino aho. Tsy hohadinoiko ny izao tontolo izao nofinofisinao sy tianao notanterahina. Hihalehibe ireo vahoaka nihaino anao ary hanangana ilay izao tontolo izao nofinofisinao. Maro ny zavabitanao. Manatena aho fa ho tamàna any amin'ny toerana tsy misy fanavakavahana sy fanenjehana ianao.
Mivavaka ho amin'ny fialan-tsasatry ny fanahinao aho.